DEG DEG: Madaxwayne ku xigeenka Barcelona oo is casilay – Gool FM
DEG DEG: Madaxwayne ku xigeenka Barcelona oo is casilay
(Catalonia) 01 Okt 2017. Madaxwayne ku xigeenka Barcelona Carles Vilarrubi ayaa gudbiyay istiqaalada uu xilka uga dagayo maadaama uu qaadacay go’aanka ay kooxdiisu ku ciyaartay kulan ay doonayeen inay baajiyaan.
Barcelona ayaa qarka u fuushay inay baajiso kulanka ay iminka Camp Nou kula ciyaarayaan Las Palmas balse handadaad kaga timid dhanka xiriirka La Liga ayay ogolaadeen inay ciyaaraan kulanka oo taageerayaal la’aan ah.
Waxaa laga jari lahaa saddexda dhibcood sidoo kalana waxay la kulmi lahaayeen ganaaxyo kale sida 6-dhibcood oo dheeri ah oo laga sii jari lahaa.
Vilarrubi ayaana la warinayaa inuu durba xilka iska casilay kaddib markii ay Barcelona qaadatay go’aanka ay kulanka ku ciyaareyso iyagoo waliba taageerayaal la’aan ah.
Madaxwaynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyay inuu doonayay in kulanka la baajiyo, balse markii dambe go’aansday inay ciyaaraan kaddib markii loogu goodiyay in laga jari doono 6-dhibcood.
“Waxaan lumin lahayn 6-dhibcood, saddex dhibcood oo ah inaan ciyaari waynay iyo saddex kale oo ciqaab ah.
“Kaddib markii aan aragnay in La Liga uu soo diiday codsigeena waxaan go’aansanay inaan kulanka ku ciyaarno hab naadir ah.
“Waxaan doonnay inaan Caalamka tusino waxa aan kula nool nahay Gobalka Catalonia.”.
RASMI: Barcelona oo ogolaatay in la ciyaaro kulanka Las Palmas Taageerayaal la'aan
GOOGOOSKA: Newcastle United vs Liverpool 1-1